जुलाई 1, 2019 जैकपोट सिटी समाचार र कैसीनो बोनस
उज्ज्वल रोशनी। ग्लैमर र glitz। प्रत्यक्ष शो, शटगन विवाह, र एक प्रसिद्ध स्लट मिसिन मा ठूलो जीत को संभावनाहरु। लास वेगाससँग जीवनको सबै पक्षबाट मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न को लागी एक प्रतिष्ठा छ साथै साथ केहि शानदार र भित्री घटनाहरु पनि।
तपाईले के भन्नुहुन्छ उनीहरूले के भन्नुहुन्छ - केगोभमा के भयो भने के हुन्छ Vegas! खैर, हामी यहाँ जैकपोटक्यासि क्यासिनोमा सिन्टी सिटीको बारेमा हाम्रो शीर्ष 10 मजा तथ्यहरू ल्याएर त्यसो त कहिलेकाहीँ शासन नियम तोड्न सक्नेछ। लास वेगास को सबै भन्दा अजीब र अद्भुत रहस्य को बारे मा सबै को खोज मा पढ्नुहोस। तपाइँ निश्चित रूपमा केही नयाँ सिक्न सक्नुहुनेछ ...
हाम्रो शीर्ष 10
#10 - द मिराज होटल को पौष्टिक सुनको सञ्झ्याल तिनीहरूको रङ्गबाट ​​वास्तविक प्राप्त गर्दछ सुन धूल।
#9 - आश्चर्यजनक रूपमा, प्रतिमास्पद लास वेगास चिन्हको डिजाइन कहिल्यै प्रतिलिपि अधिकार थिएन।
#8 - लक्सर लास वेगास रिजर्व मा विशाल स्फिक्सक्स - मिस्र स्मारक को एक मनोरञ्जन - 101 पैर मूल भन्दा ठूलो छ।
#7 - त्यहाँ लास वेगास शहर अन्तर्गत बाँचिरहेका वास्तविक व्यक्तिहरू छन्। हो, तपाईले त्यो सही तरिकाले पढ्नुहुन्छ! विशेषज्ञहरु अनुमान गरेको छ कि कम से कम 1,000 मान्छे लास वेगास को तल को विशाल सेट भूमिगत सुरंगहरुमा रहन को लागी रहछन।
#6 - लास वेगास क्यासिनोहरूमा स्याही दाउबर आपूर्तिकर्ताहरूको अनुसार, टाढाका बैंगलो खेलाडीहरूको मनपर्ने स्याङ् रंग अहिलेसम्म छ।
#5 - लास वेगास मा जीता सबै भन्दा ठूलो रकम को स्लॉट मा थियो Excalibur कैसीनो। एक 25 वर्ष पुरानो ईन्जिनियरिङ्ले 39 $ 17 लाखको 1 को लगभग XNUMX लाख को फरक फरक बिरुद्ध पुरस्कार जिते।
#4 - पप किंवदंती माइकल जैक्सन ले एक दशक पहिले एक 50 पैर लंबा बनाउन को लागि योजना बनाएको थियो, लेस वेगास रेगिस्तान मा आफु को प्रतिकृति को चलती छ। प्रतिकृति थियो 2005 मा कलाकारको योजना बनाई आगमन को विज्ञापन गर्न को लागी, र एक चन्द्रमा हिड स्वचालित रोबोट को रूप मा बनाइयो कि रेगिस्तान रेतहरु लाई घुमाउनेछ।
#3 - लास वेगास एक दिन 300 विवाह मा होस्ट। यसले यसलाई सबैभन्दा लोकप्रिय विवाह गन्तव्यमा टाढा बनाउँछ संयुक्त राज्य अमेरिका!
#2 - लास वेगास पट्टीको रोशनी बाह्य ठाउँबाट हेर्न सकिन्छ। शहर धेरै उज्ज्वल छ, वास्तवमा, यो निष्कर्षमा पृथ्वीको उज्ज्वल स्थानमा राखिएको छ।
#1 - यदि तपाईंले हरेक होटलको कोठामा हरेक लस भेगास होटल संयुक्तमा एक रात बिताउनुभयो भने, यसले तपाईंलाई 288 वर्षको बारेमा लिनेछ! वास्तवमा, लास वेगासको सबैभन्दा ठूलो होटल परिसरका चार प्रस्तावित होटेल कोठा स्यान फ्रान्सिस्कोको सम्पूर्ण महानगरहरु भन्दा बढी आवास प्रदान गर्दछ।
सबैभन्दा लोकप्रिय रूले बेटिङ सिस्टम्स
सेलिब्रिटी कैसीनो अनुमोदनहरू
लास भेगास छोडेर छाप छाप्छ
आज र कलको भुक्तानी विधिहरू
कम ब्याट्री मोबाइल क्यासिनो अभिशाप
कुनै जम्मा रकम बोनस कसरी प्रयोग गर्ने
10 सबैभन्दा रोचक लास भेगास तथ्य अपडेट गरिएको: जुलाई 1, 2019 लेखक: Damon
0.1 हाम्रो शीर्ष 10
1.1.0.1 सबैभन्दा लोकप्रिय रूले बेटिङ सिस्टम्स
1.1.0.2 सेलिब्रिटी कैसीनो अनुमोदनहरू
1.1.0.3 लास भेगास छोडेर छाप छाप्छ
1.1.0.4 प्रगतिशील जैकस्पट कसरी कार्य गर्दछ?
1.1.0.5 जम्मा कैसीनो बोनस
1.1.0.6 उच्च रोलर र अनलाइन क्यासिनोहरूको पारस्परिक लाभ
1.1.0.7 आज र कलको भुक्तानी विधिहरू
1.1.0.8 फेरी क्यासिनो लडाई: तपाईंको विट्स विन गर्न प्रयोग गर्दै
1.1.0.9 कम ब्याट्री मोबाइल क्यासिनो अभिशाप
1.1.0.10 कुनै जम्मा रकम बोनस कसरी प्रयोग गर्ने
10 सबैभन्दा चाखलाग्दो ...